U-Ksenia Sobchak uye wabonisa ukuthi akanawo cellulite
Izindaba zakamuva ezivela kumsunguli we-Instagram TV uKsenia Sobchak ubonisa ukuthi uyakhathazeka kakhulu ngemibono yabalandeli nabhalisile mayelana nesibalo sakhe se-stellar. Ngolunye usuku i-diva yezwe yabonisa ukuthi kulula kangakanani ukuwelula esitebeleni, ngakho waqinisekisa abalandeli ukuthi wenza imidlalo nsuku zonke, ngisho nalapho bephumula e-yacht nabangani. Futhi, ukwehluleka: i-Xenia kufanele ikwazi ukuziphendulela futhi iqinisekise yonke indawo ye-Instagram ukuthi imilenze yakhe ye-stellar ayinayo i-cellulite esabekayo!
Ngendlela, u-Ksenia Sobchak akhathazeki nje ngokushisa ngomlilo ngokuqondene nokungapheleli kwesibalo sakhe, kodwa futhi ngenxa yokuthi abaningi banamathela ekuboneni yena kuphela njengeNdlu ehamba phambili-2.
UKsenia Sobchak: Kuyadabukisa kakhulu ukuthi abanye abantu bayangibona mina kuphela ku-Dom-2
Phakathi naleso sikhathi, uKsenia Sobchak ukholelwa ukuthi sekuyisikhathi eside esekhulile engxenyeni yakhe yentsha futhi manje uqhuba izinhlelo ezinkulu zezombangazwe. Ngemuva kwezingxabano zamuva zakwaNaval noChubais emoyeni wesiteshi seMvula ngokubamba iqhaza kwe-TV umphathi we-TV uKsenia Sobchak, inkanyezi ayikwazanga ukuyibeka futhi iveze ngendlela yokuziphatha konke ukugxeka komphakathi waseRussia:
"Ngisuka enkulumeni yezintombi zenkosikazi yami, ngabonakala kimi ukuthi izingxabano zokuqala ezihamba phambili nombusi zibaluleke kakhulu, kungumzwelo! Kodwa cha. Kuvele ukuthi izinkinga zikaRosnano zikhathazeka iningi kakhulu kune "Sobchak ngaphandle kwe-photoshop" esiqongweni se-Yandex. Ngakho-ke, ngokusobala, siphila ohlelweni lokuphathwa kwezwe esikufanele. Ngoba i-cellulite ibaluleke kakhulu kunezombangazwe: (((Kodwa ukuthi yini okumele ikhulume, ngisabona abantu abathile kuphela eNdlini2 futhi hhayi kwi-ethers yemvula ... Futhi kudabukisayo ... "
Njengoba singabona, uKsenia wathukuthelelwa yizo zonke izinto: kokubili isithakazelo esincane sezakhamuzi ezombusazwe, nokuhlanganiswa kwegama lakhe kuphela nge-Dom-2, kanye nesithakazelo esingenampilo ku-cellulite yakhe.
U-Ksenia Sobchak wagwedeza izinkalo zakhe ngaphandle kwe-cellulite
Ngokushesha u-Xenia ugijimise ukubeka ividiyo evuselela ngokuthokoza amaqabunga aqinekile, ephakamisa ukuthi ama-instagram aphinde aqiniseke ukuthi akufanele ubheke ikhasi lakhe le-orange. Kodwa-ke, umbono wombukeli wawungeyona efanelekile ngokuphelele, ngoba le ngonyama yezingonyama zezwe ayibonanga izintambo, lapho kuvame ukuba khona i-cellulite embi, kodwa ngamadolo kuphela nangaphambili kwamathanga.
U-Ksenia Sobchak naye wangimema ukuba ngijoyine esimisweni sokuqeqeshwa nsuku zonke ekuseni:
"Bangani! Ngilindele bonke abangabaza ngesimo sami sangokwenyama ehhotela Ritz Carlton ku-1 phansi ngo-12 AM Nsuku zonke, ngaphandle kokuhamba kwebhizinisi. Ngizokutshela umqeqeshi u-Kolya :) futhi nomzimba wami, awuphelelanga, futhi ngokuqinisekile ngeke uhambe kancane nakakhulu ngeminyaka, futhi ngokujwayelekile, ungakholelwa, ufe. Ngakho-ke, ngimnika amahora afanele nengxenye ngosuku, ngizama ukugxila ngokufanayo ezintweni ezibaluleke kakhulu futhi ezihlala njalo. Futhi ngifisa sengathi lokho !! "
Ekugcineni, kuzo zonke izinkinga ezimbi ezishaya ucingo oluphuzi, uKsenia Sobchak usolwa ngethelevishini nabathwebuli bezithombe abangenakukwazi ukufaka amakhilogremu angu-6 ezinkanyezini futhi benze indaba evelele ngisho naku-Angelina Jolie.
Ngemuva kokuphawula okunjalo okuningiliziwe kumethuli we-TV mayelana ne-cellulite yakhe, okusho ukuthi, ngokusho kwe-Xenia, enye yemibuzo ethandwayo kakhulu yezinjini zokusesha kuyi-intanethi, ungathemba ngokuphepha ukuthi izindaba zakamuva zezombangazwe zizogcina zithandwa umphakathi.
U-Yana Rudkovskaya wahlukumeza izingane zikaKykorov nendodana yakhe encane
Ukukhwabanisa kwefashini: Izindaba zeKsenia Sobchak zixubene noMadonna
Udinga ukuthola umfana omuhle kakhulu esikoleni?
Ukuvikelwa kwezinwele ezisebenzayo
Amafutha Okunakekela Umzimba Amafutha Obalulekile
Kungani ukuthuthukisa amakhono amancane amakhono?
Iyini i-yoga yomntwana noma i-yoga yabancane?
Engeza izindebe zemvula: imibala emithathu ekhanyayo kakhulu entwasahlobo-2017
Yini engafanele iqukathe i-nail polish?
Indlela yokuphefumula yamaHolotropic kaStanislav Grof
Indodakazi yentombazane iphenduka futhi ayixhumani, yini engingayenza?
Ama-pink chops enenkukhu kanye ne-beetroot
Iyiphi indlela yokuhlanzeka okungcono?
Izinkukhu zezinkukhu kuhhavini le-microwave